သတင်းကောင်းတပုဒ်နဲ့ သတင်းသမားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ – Voice of Myanmar
VOM ( Voice Of Myanmar ) မှာ သတင်းထောက်လုပ်တော့မယ့် သတင်းထောက်တွေအတွက် ရုံးတွင်းသင်တန်းလေးနဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို အရင်ဆုံးမျှဝေဖလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းသမားတွေအတွက် အခြေခံသင်ခန်းစာဖြစ်သလို သတင်းဖတ်သူတွေလည်း ဘယ်ဟာကိုသတင်းလို့ခေါ်တယ် သတင်းတပုဒ်မှာ ဘယ်လို အရာတွေ ပါသင့်တယ် ၊ ဘယ်လိုလူကို သတင်းသမားလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာ သိသင့်သိထိုက်တယ်ထင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သတင်းဆိုတာ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် က လာတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှန်သမျှ သတင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ ဆရာ့ဆရာတွေက ပြောခဲ့တာကို မှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက သတင်းဖြစ်မလဲ ?
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ပဋိပက္ခ၊ နည်းပညာ၊ တိုက်ပွဲ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ မိုးလေဝသ၊ အားကစား၊ ပညာရေး၊ လူအခွင့်အရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးတွေအပြင် လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု အားကောင်းတဲ့အရာ၊ အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးတာမှန်သမျှ သတင်းဖြစ်တာပါပဲ။
သတင်းတွေကို ဘယ်နေရာတွေကနေရှာဖွေရရှိနုိုင်မလဲ ?
ဌာနဆိုင်ရာ၊ ၀န်ထမ်းတွေ၊ လူမှု ကယ်ဆယ်ရေးအသင်း၊ မီးသတ်၊ ရဲဌာန၊ ဆေးရုံ၊ လူစည်ကားတဲ့နေရာ၊ ဈေး၊ လူမှုကွန်ယက်မှတဆင့်၊ ဂျာနယ်၊ TV Channel၊ တောင်သူလယ်သမား။
သံဃာတော်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ NGO၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ၊ သတင်းစာတွေ၊ သတင်းထောက်အချင်းချင်း တွေကဆီကနေလည်း ရနုိုင်ပြီး၊ ကုိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် သူများတွေ ရေးထားပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေတွေ စတာတွေအပေါ် သတင်းထောက်ရဲ့ အမြင်အကြားစူးရှမှုပေါ်မူတည်ပြီး သတင်းတွေ အမျိုးမျိုးထွက်လာနုိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားမှု အားကောင်းရမယ်။ တိကျ၊ မှန်ကန်၊ မြန်ဆန်ရမယ်၊ အရင်းအမြစ် ခိုင်မာရမယ်။
ခိုင်မာတဲ့ ကိန်းဂဏန်း၊ နာမည်၊ ရက်စွဲ အထောက်အထားတွေဟာ စိတ်ချယုံကြည်ဖွယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ သတင်းရေးသားတဲ့နေရာမှာလည်း အများနားလည်နိုင်တဲ့ အရေးအသားဖြစ်ဖို့ ရှင်းလင်းကျစ်လစ်တဲ့ ဝါကျတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်၊ ပြည့်စုံတဲ့ သတင်းတပုဒ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ဖြစ်စဉ် နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သတင်းထောက်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်မပါအောင် သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ အထောက်အထားအတွက် ဓာတ်ပုံ၊ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ ၊ တခြားစာရွက်အထောက်အထားတွေကို တင်ပြနုိုင်ရင်တော့ စိတ်ချယုံကြည်ရဆုံး သတင်းဖြစ်ပြီလို့ မှတ်ယူရမှာပါ။
သတင်းတပုဒ်မှာ မပါမဖြစ် ဘာတွေပါဖို့ အရေးကြီးသလဲ ?
သတင်းထောက်တွေကို သင်တန်းပေးတဲ့သင်တန်းတိုင်းမှာ ဘ ၆လုံး လုို့လည်း ခေါ်ကြသလို5W-H လို့ခေါ်တဲ့ မပါမဖြစ် အခြေခံ ၆ခု ရှိပါတယ်။ What ဘာဖြစ်တာလဲ Where ဘယ်နေရာမှာလဲ Who ဘယ်သူတွေလဲ Why ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ကြလဲ When ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်တာလဲ How ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြလဲ ဆိုတာတွေ မပါမဖြစ် သတိထားရသလို How many ဘယ်လောက်များများဖြစ်လဲ၊ အဲဒီတော့ So What ဘာဆက်ဖြစ်ကြသလဲ ဆိုတာတွေအပြင် Background ဆိုတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းတရားတွေနဲ့ ဒီလိုအလားတူဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာတွေ ပါဖို့ လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအတွက် သတင်းထောက်က ကိုယ့်သတင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေဖြည့်စွက်ရသလို ကိုယ်တုိုင်လည်း သိအောင် လေ့လာထားတဲ့ ဝမ်းစာတွေကို ဖြည့်တင်းနိုင်မှ သင့်ယုံရှိပါမယ်။ ဒါမှ ကိုယ်ရေးတဲ့သတင်းစာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သတင်းတပုဒ်အဖြစ် စာဖတ်သူက မှတ်ယူပြီး သူတို့ရချင်တဲ့ သတင်းဆာလောင်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းထောက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ ?
သတင်းစာပညာကို ထိုက်သင့်သလောက် မတတ်မဖြစ် တတ်ကိုတတ်ရပါမယ်။
ဇွဲ၊ လုံ့လ ရှိဖို့လုိုသလို သတင်းစာပညာအပေါ်ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်၊ ဝါသနာ ၊ စေတနာတွေ မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် သတင်းသမားကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ နေထိုင်ရမယ်၊ ဥပဒေ စည်းကမ်းတွေလိုက်နာရမယ်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်၊ အဆက်အသွယ်တွေများများ ရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး လေ့လာမှုအားကောင်းမှ ရပါတယ်။
သတင်းလုိုက်တဲ့နေရာ အင်တာဗျူးသွားတဲ့နေရာတွေမှာ လူရိုသေရှင်ရုိုသေဖြစ်ဖို့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတတ်ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေထိုင်တတ်ပြီးတော့ သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေ ရှိကိုရှိရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အယုံအကြည် မလွယ်ရပဲ သတင်းအတွက် သံသယစိတ်ထားရပါမယ်။ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမယ်၊ မှတ်သားပြီး မေးခွန်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားရမယ်၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရေးသားရဲရမယ်၊ အဂတိကင်းကင်းနဲ့ မှန်ကန်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။
သတင်းအကြောင်းအရာတွေဖြစ်စဉ်တွေ သတင်းတွေတွေ့တုိုင်း အလွယ်မယုံပဲ ဒီအကြောင်းအရာဟာ တကယ့်ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းဌာနလား၊ သတင်းပါအကြောင်းအရာမှာ ဘယ်လုိုရင်းမြစ်တွေကို သုံးထားလဲ သတင်းရဲ့ ခုိုင်မာမှုကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တွေကတော့ စပ်စုတတ်တဲ့စိတ် ရှိရမယ်၊ အရေးကြီးသတင်းရှိချိန် သွားလာနိုင်ရမယ်၊ သတင်းရေးသားတဲ့နေရာမှာ ပါတီစွဲ ၊ ငါစွဲ ကင်းရှင်းရပါမယ်၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းရမယ်။ သတင်းသမားကိုယ်တုိုင်က ပါတီဝင်၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေရင်တော့ အဲဒီသတင်းသမားကို ယုံကြည်မှုကျဆင်းတတ်တာကို သတိထားပြီး ပါတီနုိုင်ငံရေးတွေကို ကင်းနုိုင်သမျှ ကင်းနုိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
နောက်ဆုံး အရေးကြီးတာကတော့ အာဏာရှင်စနစ်မှာ သတင်းထောက်ကို တရားစွဲတာ သတင်းရင်းမြစ်ကို တရားစွဲထောင်ချတာ ရန်ရှာတာတွေရှိတတ်တာမို့ ကိုယ့်ကိုသတင်းပေးသူကို ကာကွယ်ရပါမယ်၊ သတင်းမှတ်တမ်းတွေကို ထိမ်းသိမ်းမှုစွမ်းရှိကိုရှိရမှာပါ။
ဒါတွေသိထားတတ်ထားယုံနဲ့ သတင်းထောက်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ နိုးပါ။ လေ့လာသင်ယူရမယ့် သင်ခန်းစာတွေ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးလုိုအပ်ပါသေးတယ်။ ကင်မရာကိုင်တုိုင်း ဖေ့ဘုတ်မှာ လူတွင်ကျယ်ဖြစ်နေတိုင်း သတင်းသမားလို့ မထင်သင့်ပါ။
ဒီအခြေခံ အကြောင်းအရာတွေဟာ သတင်းသမားတိုင်း မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် သိထားရမယ့် အခြေခံ သင်ခန်းစာတွေဖြစ်သလို သတင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေလည်း သိသင့်တာတွေမို့ VOM အယ်ဒီတာအာဘော်ကဏ္ဍကနေ တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သတငျးကောငျးတပုဒျနဲ့ သတငျးသမားကောငျး တဈယောကျဖွဈဖို့
VOM ( Voice Of Myanmar ) မှာ သတငျးထောကျလုပျတော့မယျ့ သတငျးထောကျတှအေတှကျ ရုံးတှငျးသငျတနျးလေးနဲ့ သိသငျ့သိထိုကျတာတှကေို အရငျဆုံးမြှဝဖေလှယျဖွဈပါတယျ။ သတငျးသမားတှအေတှကျ အခွခေံသငျခနျးစာဖွဈသလို သတငျးဖတျသူတှလေညျး ဘယျဟာကိုသတငျးလို့ချေါတယျ သတငျးတပုဒျမှာ ဘယျလို အရာတှေ ပါသငျ့တယျ ၊ ဘယျလိုလူကို သတငျးသမားလို့ချေါတယျဆိုတာ သိသငျ့သိထိုကျတယျထငျလို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ။
သတငျးဆိုတာ အရှေ့၊ အနောကျ၊ တောငျ၊ မွောကျ က လာတဲ့ ထူးခွားတဲ့ ဖွဈစဉျမှနျသမြှ သတငျးလို့ချေါတယျလို့ အဆငျ့ဆငျ့လကျဆငျ့ကမျးလာတဲ့ ဆရာ့ဆရာတှကေ ပွောခဲ့တာကို မှတျသားခဲ့ဘူးပါတယျ။
ဘယျအရာတှကေ သတငျးဖွဈမလဲ ?
သဘာဝဘေးအန်တရာယျ၊ ပဋိပက်ခ၊ နညျးပညာ၊ တိုကျပှဲ၊ ဖြျောဖွရေေး၊ နိုငျငံရေး၊ မိုးလဝေသ၊ အားကစား၊ ပညာရေး၊ လူအခှငျ့အရေး၊ ဥပဒပွေုရေး၊ တရားစီရငျရေးတှအေပွငျ လူတှေ စိတျဝငျစားမှု အားကောငျးတဲ့အရာ၊ အမြားနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အရေးကွီးတာမှနျသမြှ သတငျးဖွဈတာပါပဲ။
သတငျးတှကေို ဘယျနရောတှကေနရှောဖှရေရှိနိုငျမလဲ ?
ဌာနဆိုငျရာ၊ ဝနျထမျးတှေ၊ လူမှု ကယျဆယျရေးအသငျး၊ မီးသတျ၊ ရဲဌာန၊ ဆေးရုံ၊ လူစညျကားတဲ့နရော၊ ဈေး၊ လူမှုကှနျယကျမှတဆငျ့၊ ဂြာနယျ၊ TV Channel၊ တောငျသူလယျသမား။
သံဃာတျောမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီ၊ NGO၊ ကုနျသညျကွီးမြားအသငျး၊ စားသောကျကုနျလုပျငနျးရှငျမြား၊ ထုတျပွနျခကျြတှေ၊ သတငျးစာတှေ၊ သတငျးထောကျအခငျြးခငျြး တှကေဆီကနလေညျး ရနိုငျပွီး၊ ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့၊ ဒါမှမဟုတျ သူမြားတှေ ရေးထားပွီးခဲ့တဲ့ သတငျးတှရေဲ့ နောကျဆကျတှဲ အခွအေနတှေေ စတာတှအေပျေါ သတငျးထောကျရဲ့ အမွငျအကွားစူးရှမှုပျေါမူတညျပွီး သတငျးတှေ အမြိုးမြိုးထှကျလာနိုငျပါတယျ။
စိတျဝငျစားမှု အားကောငျးရမယျ။ တိကြ၊ မှနျကနျ၊ မွနျဆနျရမယျ၊ အရငျးအမွဈ ခိုငျမာရမယျ။
ခိုငျမာတဲ့ ကိနျးဂဏနျး၊ နာမညျ၊ ရကျစှဲ အထောကျအထားတှဟော စိတျခယြုံကွညျဖှယျဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ သတငျးရေးသားတဲ့နရောမှာလညျး အမြားနားလညျနိုငျတဲ့ အရေးအသားဖွဈဖို့ ရှငျးလငျးကဈြလဈတဲ့ ဝါကတြညျဆောကျနိုငျဖို့လိုပါတယျ၊ ပွညျ့စုံတဲ့ သတငျးတပုဒျဖွဈဖို့ဆိုရငျ ဒီဖွဈစဉျနဲ့ အလားသဏ်ဍာနျတူတဲ့ဖွဈစဉျ နောကျခံအကွောငျးအရာတှထေညျ့ဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့
သတငျးထောကျရဲ့ ထငျမွငျယူဆခကျြမပါအောငျ သတိထားဖို့လိုအပျပါတယျ၊ အထောကျအထားအတှကျ ဓာတျပုံ၊ဗီဒီယိုဖိုငျတှေ ၊ တခွားစာရှကျအထောကျအထားတှကေို တငျပွနိုငျရငျတော့ စိတျခယြုံကွညျရဆုံး သတငျးဖွဈပွီလို့ မှတျယူရမှာပါ။
သတငျးတပုဒျမှာ မပါမဖွဈ ဘာတှပေါဖို့ အရေးကွီးသလဲ ?
သတငျးထောကျတှကေို သငျတနျးပေးတဲ့သငျတနျးတိုငျးမှာ ဘ ၆လုံး လို့လညျး ချေါကွသလို5W-H လို့ချေါတဲ့ မပါမဖွဈ အခွခေံ ၆ခု ရှိပါတယျ။ What ဘာဖွဈတာလဲ Where ဘယျနရောမှာလဲ Who ဘယျသူတှလေဲ Why ဘာ့ကွောငျ့ဖွဈကွလဲ When ဘယျအခြိနျမှာ ဖွဈတာလဲ How ဘယျလိုတှဖွေဈကွလဲ ဆိုတာတှေ မပါမဖွဈ သတိထားရသလို How many ဘယျလောကျမြားမြားဖွဈလဲ၊ အဲဒီတော့ So What ဘာဆကျဖွဈကွသလဲ ဆိုတာတှအေပွငျ Background ဆိုတဲ့ နောကျခံအကွောငျးတရားတှနေဲ့ ဒီလိုအလားတူဖွဈစဉျတှေ ဖွဈခဲ့ဘူးတာတှေ ပါဖို့ လညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီအတှကျ သတငျးထောကျက ကိုယျ့သတငျးနဲ့ဆိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ရှာဖှဖွေညျ့စှကျရသလို ကိုယျတိုငျလညျး သိအောငျ လလေ့ာထားတဲ့ ဝမျးစာတှကေို ဖွညျ့တငျးနိုငျမှ သငျ့ယုံရှိပါမယျ။ ဒါမှ ကိုယျရေးတဲ့သတငျးစာ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ သတငျးတပုဒျအဖွဈ စာဖတျသူက မှတျယူပွီး သူတို့ရခငျြတဲ့ သတငျးဆာလောငျမှုကို ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
သတငျးထောကျကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ ဘာတှလေိုအပျမလဲ ?
သတငျးစာပညာကို ထိုကျသငျ့သလောကျ မတတျမဖွဈ တတျကိုတတျရပါမယျ။
ဇှဲ၊ လုံ့လ ရှိဖို့လိုသလို သတငျးစာပညာအပျေါခံယူခကျြ၊ ယုံကွညျခကျြ၊ ဝါသနာ ၊ စတေနာတှေ မရှိမဖွဈလိုပါတယျ။
ဒါတှအေပွငျ သတငျးသမားကငျြ့ဝတျနဲ့အညီ နထေိုငျရမယျ၊ ဥပဒေ စညျးကမျးတှလေိုကျနာရမယျ၊ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးရမယျ၊ အဆကျအသှယျတှမြေားမြား ရှိအောငျကွိုးစားအားထုတျပွီး လလေ့ာမှုအားကောငျးမှ ရပါတယျ။
သတငျးလိုကျတဲ့နရော အငျတာဗြူးသှားတဲ့နရောတှမှော လူရိုသရှေငျရိုသဖွေဈဖို့ ဝတျစားဆငျယငျမှုတတျရပါတယျ။ သနျ့ရှငျးသပျရပျစှာ နထေိုငျတတျပွီးတော့ သတငျးရငျးမွဈတှနေဲ့ အပွနျအလှနျလေးစားမှုတှေ ရှိကိုရှိရပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ အယုံအကွညျ မလှယျရပဲ သတငျးအတှကျ သံသယစိတျထားရပါမယျ။ စဈဆေးမှုပွုလုပျရမယျ၊ မှတျသားပွီး မေးခှနျထုတျဖို့စဉျးစားရမယျ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရေးသားရဲရမယျ၊ အဂတိကငျးကငျးနဲ့ မှနျကနျမှုရှိဖို့လိုပါတယျ။
သတငျးအကွောငျးအရာတှဖွေဈစဉျတှေ သတငျးတှတှေတေို့ငျး အလှယျမယုံပဲ ဒီအကွောငျးအရာဟာ တကယျ့ယုံကွညျရတဲ့ သတငျးဌာနလား၊ သတငျးပါအကွောငျးအရာမှာ ဘယျလိုရငျးမွဈတှကေို သုံးထားလဲ သတငျးရဲ့ ခိုငျမာမှုကို စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
နောကျထပျလိုအပျခကျြတှကေတော့ စပျစုတတျတဲ့စိတျ ရှိရမယျ၊ အရေးကွီးသတငျးရှိခြိနျ သှားလာနိုငျရမယျ၊ သတငျးရေးသားတဲ့နရောမှာ ပါတီစှဲ ၊ ငါစှဲ ကငျးရှငျးရပါမယျ၊ ဘကျလိုကျမှုကငျးရမယျ။ သတငျးသမားကိုယျတိုငျက ပါတီဝငျ၊ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ဝငျဖွဈနရေငျတော့ အဲဒီသတငျးသမားကို ယုံကွညျမှုကဆြငျးတတျတာကို သတိထားပွီး ပါတီနိုငျငံရေးတှကေို ကငျးနိုငျသမြှ ကငျးနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပါဘဲ။
နောကျဆုံး အရေးကွီးတာကတော့ အာဏာရှငျစနဈမှာ သတငျးထောကျကို တရားစှဲတာ သတငျးရငျးမွဈကို တရားစှဲထောငျခတြာ ရနျရှာတာတှရှေိတတျတာမို့ ကိုယျ့ကိုသတငျးပေးသူကို ကာကှယျရပါမယျ၊ သတငျးမှတျတမျးတှကေို ထိမျးသိမျးမှုစှမျးရှိကိုရှိရမှာပါ။
ဒါတှသေိထားတတျထားယုံနဲ့ သတငျးထောကျဖွဈပွီလားဆိုတော့ နိုးပါ။ လလေ့ာသငျယူရမယျ့ သငျခနျးစာတှေ အတှအေ့ကွုံတှေ အမြားကွီးလိုအပျပါသေးတယျ။ ကငျမရာကိုငျတိုငျး ဖဘေု့တျမှာ လူတှငျကယျြဖွဈနတေိုငျး သတငျးသမားလို့ မထငျသငျ့ပါ။
ဒီအခွခေံ အကွောငျးအရာတှဟော သတငျးသမားတိုငျး မဖွဈမနလေိုကျနာရမယျ့ သိထားရမယျ့ အခွခေံ သငျခနျးစာတှဖွေဈသလို သတငျးစိတျဝငျစားသူတှလေညျး သိသငျ့တာတှမေို့ VOM အယျဒီတာအာဘျောကဏ်ဍကနေ တငျပွလိုကျရခွငျးဖွဈပါတယျ။